KwaPorters Grange sikholelwa ekudlaleni ndawonye, ​​ukufunda ndawonye nokukhula ndawonye. Izingane zihamba phambili ekufundiseni kwethu. Ikharikhulamu yethu icebile ngolimi nokuhlangenwe nakho, kucatshangelwa ngesitayela futhi kumnandi ekulethweni! Sithuthukisa intuthuko yomuntu siqu neyenhlalo ngokukhuthaza izingane ukuthi zibambisane futhi zisebenzisane futhi ziveze imvelo yazo ephephile futhi evikelekile besebenzisa abantu abadala njengezibonelo eziyizibonelo. Sigqugquzela futhi sikhuthaza izingane ukuthi zibe ngabaholi bokufunda kwazo futhi zifundise amakhono okudlulisa ukufunda kwazo ngokudlala ngendlela enenjongo. Lokhu kuzobabekela namakhono ezenhlalo adingekayo ukuze bathuthuke baye esigabeni sabo esilandelayo sokufunda.
Ngokusebenzisa ikharikhulamu yethu sihlose uku:
- Yakha ubudlelwano obuhle nabafundi, abazali kanye nabanakekeli
- Khulisa abafundi bethu ngesimo esijabulisayo, esiphephile nesivikelekile
- Fundisa amakhono ukuze izingane zilawule ukufunda kwazo futhi zibeke engcupheni kokuhlangenwe nakho kwazo
- Thuthukisa ukuzethemba kwabafundi bethu ukuze babe abafundi abazimele
- Khuthaza ukucabanga okubucayi nokudala
- Scaffold yokufunda ukukhuthaza amazinga aphakeme kakhulu okubandakanyeka
- Gubha nezingane zethu empumelelweni yazo futhi ubonise ukuthi siyaziqhenya ngabo
- Hlakulela isimo sengqondo sokuthi 'hamba' ukuze bangapheli amandla ekuqaleni kwesithiyo
Ikharikhulamu yethu inikeza izikhathi zokufunda ezicebile, ezinenjongo futhi igcizelela ukufunda ngokudlala nangokuhlola. Ukudlala kuyaziwa ekusekeleni amazinga aphezulu enhlalakahle. Abasebenzi, abanekhono lokufundisa ngokudlala, banomthelela omkhulu enqubekweni yezingane. Babona izikhathi lapho bengaqinisa futhi bathuthukise ukufunda esikubiza ngokuthi 'Ukuhlela Ngomzuzwana'. Le ndlela igxila kakhulu kulukuluku lwemvelo futhi inika amandla izingane ukuthola ukwesaba nokumangala emhlabeni. Ikhuthaza ukuzibandakanya ngenkuthalo ekufundeni, ekucabangeni ngokuhlolisisa nangendlela yokuxazulula izinkinga ngendlela enengqondo. Inika amandla ukukhuthazeka okukhulu nokuzishayela ngendlela yokufunda. Amathuba okufunda enzeka ngaphakathi nangaphandle futhi ahlanganisa ukufunda ezindaweni ezahlukene nsuku zonke esikubiza ngokuthi 'ukuhamba ngokukhululeka'. Ngalesi sikhathi, indima yomuntu omdala ukukhulisa ngobuciko ukucabanga kwezingane futhi akhuthaze ukubambisana nokusebenza ngokubambisana. Abantu abadala baphinde bahlele imisebenzi ethile yekilasi neyeqembu evumelana nezidingo zezingane ukufundisa imisindvo nezibalo.
Zonke izindawo eziyisikhombisa zokufunda zifundiswa ngokudlala usuku ngalunye lonyaka:
Ukuthuthuka Komuntu Siqu, Komphakathi Nokomzwelo
Ubuciko obuchazayo nokuklama
Imisindo ifundiswa nsuku zonke, kusetshenziswa uhlelo olubizwa ngokuthi Izinhlamvu Nemisindo. Izingane zifundiswa emakilasini ngokwendabuko futhi kamuva ziqoqwe ngokuncike kokuhlangenwe nakho kokufunda kanye nempumelelo.
Ikhwalithi yethu ephezulu, evikelekile, evumela imvelo yethu ithuthukisa yonke imikhakha yokufunda. Izingane zingafinyelela kuzo zonke izindawo eziyisikhombisa zokufunda ngokuqhubekayo ukwenza izixhumanisi zazo ekufundeni. Umuntu omdala uthuthukisa ukuhlinzekwa kwemvelo ukuze kuhambisane nezidingo zabafundi ukuze kuvuselele inhlansi yokufunda.
Abakwa-Porters Grange bagubha ukwehlukahlukana okubanzi kwabafundi bethu nezizinda zabo. Sithuthukisa Izindinganiso ZaseBrithani ngokweluka izici ngempilo yansuku zonke yesikole; ngokufundisa abafundi bethu ukuthi balalelane futhi balinde ngaphambi kokukhuluma, ukuthi bangasiza kanjani, babe nomusa futhi babe nenhlonipho, bazi umehluko phakathi kokulungile nokungalungile nokufunda ngemikhosi ehlukahlukene emasikweni abo.
UNkk L Maltby
Mnu C Sesinak
Nksz V Caplan &
Nksz L Martin
UNkk M Bines noNkk P Lander
UNkk L Britton noNkk C Eldred
UNkk S Richardson-Foster noNkk N Quaglia-Hunt
Izidlo Zakusihlwa Zesikole
Thola okuningi ngeminyaka yethu yokuqala